ထူးခြားတဲ့အမျိုးမျိုးကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်း Scooter - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
အဆိုပါ mannequin ယင်းမော်တာ၏အရည်အသွေးနှုန်းအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားခံရဖို့ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ငွေအများကြီးစျေးသွားမယ့်, သို့သော်ဆောက်လုပ်ရေးမှာကြည့်, ဤအန္တရာယ်ကောင်လေး၏ဆောက်လုပ်ရေး၏သက်သက်အရည်အသွေးကိုတာ, သင်ကပုန်းခိုနေတဲ့ Transformer ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမအံ့သြ left ပါတယ်။ တောင်ခရီးမကျင့်သောသူအကျွန်တော်တို့ကိုဤအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောအလွယ်တကူအားပြန်သွင်းနိုင် စကိတ်စီး သို့မဟုတ် Electric longboardရိုးရှင်းဝေးလံခေါင်သီသုံးပြီးဓာတ်ဆီငွေချွေတာ, ဒီပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းကိုမချစ်မှဘာလဲ ဒါဟာဘီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်စေပါလိမ့်မယ်သင်ကပတ်ပတ်လည်ကိစ္စများရန်သင့်မိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ခုဘီးတရပ်တည်မှုဧရိယာရှာတှေ့နိုငျရှိရာ၎င်းတို့အကြားတစ်ဦးအကြမ်းခံခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဖွယ်ရှိလမ်းထဲမှာလာပြီးသွားလာလိမ့်မည်။ သူတို့ကပိုပြီးဒူးအခန်းတစ်ခန်းနှင့်စတီယာရင်စီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်စေသည်လုပျသောသူဖွဒီဇိုင်း, အမြန်ဘက်ထရီ, ချိန်ညှိထိုင်ခုံအမြင့်နှင့်ဖော-သက်သေပြတာယာ join ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်စရာ, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအပေါ်မှီခိုအကြီးအကျယ်ကုမ္ပဏီများသည်ငါသိမြင်စေခြင်းငှါ, အဘယ်အရာကိုမြင်ခြင်းနှင့်မြင့်တက်နည်းပညာများနှိပ်စက်လိမ့်မည်ဟုသောငါ၏စိုးရိမ်မှုတွေအခြေအမြစ်သက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အစောပိုင်းအဆင့်တွင်အမှားအယွင်းများအပေါငျးတို့သပေါ်တက်စမ်းသပ်ရန်နှင့်ပင်အပိုဆောင်းကသုတေသနမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်များအမှန်တကယ်ပျဉ်ပြားပေါ်တွင်အမှန်တကယ်-ဘဝအတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြရန် - Koowheel စမတ် Balance ဘီး K8 သူတို့အလွန်သေးငယ်ဖြစ်ကြပြီးကမီလန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောကွောငျ့အလွန်အသုံးဝင်နှင့်ပညာရှိများမှာပါကမူလစိတ်ကြိုက်အီးယူဈေးကွက်ရဲ့။ ; တလက်, Hidden လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းကိုအလွယ်တကူသယ်ဆောင်တွင် အခြားတစ်ဖက်တွင်, လမ်းဘီးဒီဇိုင်းကိုချွတ်, အလွယ်တကူပျမ်းမျှမော်ဒယ်အကြားမျက်စိဖမ်း။ ထို့အပွငျကပါးလွှာနဲ့အလင်းအလေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အလျင်နဲ့ controller ၏ပုံစံများကိုအများကြီးစှာကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်များနှင့်အတူရှိနေပါသည်။ အဆိုပါဘရိတ်နှင့်အရှိန်လည်းနည်းနည်းနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်; ဝမ်းနည်းစွာမြင်းစီးသူရဲဘရိတ်မပေးနိုင်ပါသို့မဟုတ်ဘီး၏အခြားရွေးချယ်စရာသင်တန်းအတွက်လှည့်ခြင်းနှင့်မော်တာသင့်ရဲ့နှေးကွေးမှစွမ်းရည်နှင့်အလျင်တက် curtailing ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲဆုံးရှုံးနေချိန်မှာအရှိန်မြှင့်။ သို့သော် Koowheel လျှပ်စစ် hoverboard K8 အဆိုပါ max ကိုမြန်နှုန်း 10km / h ဖြစ်ပါသည်ကြောင့်မော်တာရဲ့မြန်နှုန်း 10km / h ၏ setting ကိုသတိပေးအမြန်နှုန်း, သတိပေးဉသြသံနှိုးစက်ရောက်ရှိသောအခါ, အထူးဖြစ်၏ ကအမြန်နှုန်းကန့်သတ် (သတ်မှတ်ချက်တန်ဖိုးကို: 10km / h) ကိုအောက်တွင်သောအခါ, သတိပေးဉသြသံနှိုးဆော်သံမ။ ဒါကြောင့်သည်အခြားသာမန်ဆိုင်ကယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအချိန်မီ braking လွန်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါ။
တကယ်ပဲအားလုံးတစ်ပုံစံတည်းနှင့်မည်သို့ပင်ဆိုစေကောင်းတဲ့စီး! သင့်ရဲ့ခရီးစတင်ထိုသို့ပြုမှတစ်ဦးမဖြစ်မနေရဲ့အလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသောခြေဖြင့်ပေါ်ခြေလှမ်းနှင့်ထွန်းလင်းရန်အစက်ချုပ်အပေါ်ဦးဆောင်အလင်းဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်စျေးကွက်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများဆောက်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ မိမိကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီ Scooter ။ သငျသညျကိုဘယ်လိုတစ်ခုရိပ်မိခင်မှာ လျှပ်စစ်စကိတ်စီးအကျင့်ကိုကျင့်သင်ကလုပ်ကိုအသုံးပြုဖို့အဘယ်အရာကိုဆုပ်ကိုင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာ၏မျက်နှာကိုတွင်, ထိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ 3-D ကိုနည်းပညာအသုံးပြုမှုနေသောဧရာစကေးနှင့်အတူပါရာဒိုင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပုံနှိပ်မီဒီယာဒေသအလိုက်အိမ်ထဲသငျ့လျြောသောတမန်တော်အမှန်, ပြန်လည်အသုံးပြုအဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်ကတည်ငြိမ်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ပိုကောင်းသွား; အဆိုပါနှေးကွေးကြှနျုပျတို့သညျသှား, ကချိန်ခွင်လျှာကိုစောင့်ရှောက်ရန်တွေအများကြီးသို့ ပို. ခက်ခဲလှည့်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကို run ဟာဗို့အားအထက်, အ costlier ရပါလိမ့်မယ်။ သောထုတ်ကုန်အစိုးရစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်လုံခြုံရေးစမ်းသပ်ခြင်း, လျှပ်စစ်နှင့်ဘက်ထရီအကဲဖြတ်, charger ကိုအစီအစဉ်များမှတဆင့်သွားပြီနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်ဆိုလိုသည်။
အချိန် post: ဇန်နဝါရီ-12-2018